အာဖရိကဘိုးဘေးများမှသည် "ခရစ်ယာန်သူတော်စင်များ" အထိ - Afrikhepri Fondation
ပုံ - ခရစ်ယာန်များသည်ဘိုးဘေးတစ် ဦး ၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်း (ဦး ခေါင်းခွံ) ဖြင့်အခမ်းအနားများဆင်နွှဲသည်။
အာဖရိကဘိုးဘေးများမှ "ခရစ်ယာန်သူတော်စင်များ" သို့
DAfrican အာဖရိကန်ဝိညာဉ်ရေးရာသည်ဘိုးဘေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်တင်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဘိုးဘေးများသည်သေလွန်သူများမဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သေခြင်းဟုခေါ်သောအရာသည်အာဖရိကတွင်မတည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာဖရိကဝိညာဉ်ရေးတွင်သေပြီးနောက်အသက်ရှင်ခြင်းရှိသည်။ ဘိုးဘေးဘီဘင်တစ် ဦး သည်အမှန်တကယ်သေခြင်းမဟုတ်သော (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမှလူအားလုံးသို့ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေသို့) ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောသူဖြစ်ခြင်း (သေခြင်းအားဖြင့်) ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှဖန်တီးသူတည်ရှိရာကမ္ဘာသို့ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်နောင်တချိန်တွင် (ဘုရားသခင့်တရားစီရင်ခြင်းစမ်းသပ်မှုခံယူပြီးနောက်) တရား ၀ င်ပြီးသန့်ရှင်းခြင်းခံယူရသောရိုးရိုးလေးမျှသာဖြစ်သည်။
ဘိုးဘေးများသည်တီထွင်သူနှင့်အတူတူဖြစ်ပြီးသူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကြားခံများ (ဘုံချည်များ) ဖြစ်သည်။ ဘိုးဘေးများသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောလူနေမှုဘ ၀ ဖြစ်ပြီးနောင်တွင်ဖန်ဆင်းရှင်၏ရင်ခွင်သို့ပြန်သွားကြသည်။ ဘိုးဘေးများသည်သေလွန်သူများမဟုတ်ကြသော်ငြားလည်းအသက်ရှင်သောသတ္တဝါများသည်နောင်လာလတ္တံ့သောကြောင့်အာဖရိကသားများသည်ဘာသာရေးထုံးတမ်းများနှင့်အခမ်းအနားများကို ပြုလုပ်၍ သူတို့နှင့်စကားပြောဆိုရန်၊ သတင်းများယူရန်၊ ဖန်တီးသူကနေ။
ကြီးမားသောမိသားစုအစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောမိသားစုဆုံးဖြတ်ချက်များစသည်တို့ရှိပါက မိသားစုလိုင်းဘိုးဘေးများသည်မိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း၊ မွေးဖွားခြင်းစသည်တို့ကိုသက်သေခံရန်တောင်းဆိုခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံသည်၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်၊ သို့မဟုတ်မိသားစုကိုဖန်တီးသူနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါရန်တောင်းဆိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံထိုအခမ်းအနားများကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် (သူ့အသက်တစ်လျှောက်ကွယ်လွန်သွားသောပစ္စည်းများကို) သို့မဟုတ်မိသားစုမှတန်ဖိုးထားသည့်သူ၏အရိုးများ (ဦး ခေါင်းခွံ၊ အရိုးစသည်တို့) ကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါဥရောပတိုက်သားကဤဘာသာရေးထုံးတမ်းက "ဘိုးဘေးကိုးကွယ်မှု" သို့မဟုတ်ထိုအလေ့အကျင့်များ demonizing က "လူသေအစွန်းရောက်" ကိုပေး၏။
သို့သော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင်ခရစ်ယာန်များသည်သူတော်စင်များဟုခေါ်ဆိုသူများသည်ဆိုလိုသည်မှာစိန့်ပေါလ်၊ စိန့်ပီတာ၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ ။ ၎င်းတို့သည်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်သူတို့၏ဘိုးဘေးများမဟုတ်ပေလော။ ၎င်းတို့သည်နောင်လာမည့်အရာများထဲသို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့နှင့်အတူသခင်ယေရှုနှင့်ကြားဝင်ကူညီပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသူတော်စင်များသည်ဆုတောင်းခြင်း၊ အခမ်းအနားများ၊ လူငယ်များ၊ နီ ၀ န်များစသည်တို့ဖြင့်သူတို့ပြောဆိုသောသူသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူများမဟုတ်ပေလော။
သို့သော်အာဖရိကန်တစ် ဦး သည်ဤသို့သောဓလေ့ထုံးစံများကိုလုပ်ဆောင်သောအခါအခမ်းအနားများကိုပြုလုပ်ရန်ဤဘိုးဘေး၏ ဦး ခေါင်းခွံ (ရှေးဟောင်းပစ္စည်း) ကို အသုံးပြု၍ သူ၏ဘိုးဘေး (ဥပမာအားဖြင့်သူ၏အဖိုးအဖွား) ကိုအခမ်းအနားများပြုလုပ်ရန်လူတိုင်းက“ မာရ်နတ်! "" စုန်းအတတ်! "" စာတန်ဝါဒ! " စသည်တို့
ဤပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းခရစ်ယာန်များသည်ရိုးရာဓလေ့များ (အရိုးများ၊ ဦး ခေါင်းခွံ) ကိုဓလေ့ထုံးတမ်းများပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ဘိုးဘေးများ (သူတော်စင်များဟုခေါ်ဆိုသူ) အားလည်းအလားတူအခမ်းအနားများပြုလုပ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ထိုသို့ပြုလျှင်နတ်ဆိုး၊ နတ်ဆိုး၊ နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ဟုအဘယ်သူမျှမပြော၊
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းထင်ရှားသောဘာသာတရားများကဘိုးဘေးများ၏ဝိညာဉ်ရေးကိုနတ်ဆိုးစွဲခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ဖော်သည်။ ထို့ကြောင့်အာဖရိကသားများကိုနတ်ဆိုးများနှင့်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်လိုက်စားခြင်းဟုယူဆကြသောဤထုံးတမ်းစဉ်လာများသည်ထိုဘာသာရေးထုံးတမ်းဓလေ့များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဘာသာတရားများ၌ plagiarized and ကျင့်သုံးသောအခါသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာများဖြစ်လာသည်။
SOURCE မှ: http://africanhistory-histoireafricaine.com
Negro လူမျိုးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ အီဂျစ် Negro ရှေးဟောင်းမှသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြProbleနာများအထိ ...
€7ကနေ 15,15 အသစ်
4 14,90 €ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 15,20 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 30, 2021 3:38 pm တွင် updated
ကမ္ဘာ၏သူကပြောတယ် - Frantz Fanon
ကွန်ဂို၊ David Van Reybrouck